पोखरामा पैसा तिरेर पिसिआर परीक्षण गर्नेको संख्या बढयो – Sabaikoaawaj.com
पोखरामा पैसा तिरेर पिसिआर परीक्षण गर्नेको संख्या बढयो
मङ्लबार, भदौ ३०, २०७७ 6:31:42 PM	मा प्रकाशित
पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको पोखरा प्रतिष्ठानमा पुगेर आफै पैसा तिरेर पिसिआर परीक्षण गराउनेको संख्या बढेको छ । सरकारले आफुखुसी पिसिआर परिक्षण गर्न चाहनेलाई शुल्क लिएर परिक्षण गर्ने निर्णय गरेपछि पोखरामा पनि शुल्क लिन थालिएको अस्पतालले जनाएको छ । सोमबार सम्म ८४१ जनाले आफै पैसा तिरेर परिक्षण गरेका छन् ।
साउन १ गतेदेखि हालसम्म यसरी शुल्क तिरेर जनाले कोरोना परीक्षण गरिसकेको अस्पतालको प्रयोगशाला निर्देशक डा. मोनी सुवेदीले जानकारी दिनु भयो ।
पोखरामा पिसिआर परिक्षण गर्दा शुरुवातमा साउन १ गते उनले ५ हजार ५ सय भदौ १५ गते सम्म ४ हजार ४ सय र भदौ २८ गतेबाट २ हजार रुपैया लिने गरेको उहाँले जानकारी दिए ।
सरकारले पठाएको पत्र अनुसार नै शुल्क लिएर स्वाब परिक्षण गरेको अस्पतालको प्रयोगशाला निर्देशक डां सुवेदीले भनाइ छ । आफुखुसी पिसिआर परिक्षण गर्न आउनेहरूको पनि केहीको रिपोर्ट भने पोजेटिभ आएको उनले बताइन्। रिपोर्ट पोजेटिभ आएका बिरामीलाई आइसोलेसनमा राख्ने र त्यसपछाडिको परीक्षण भने निःशुल्क गरेको डा. सुवेदीले बताइन्।
पोखरामा शुल्क तिरेर पिसीआर गराउने मध्ये ८४१ जना मध्ये २१ जनाको रिर्पोट पोजेटिभ आएको उहाँले जानकारी दिनु भयो । आइतबार मात्र १०० जनाले पिसीआर गरेको उहाँले बताउनु भयो । काठमाडौ जानुपर्नेले थानकोटमा पिस्ीआर रिर्पोट देखाउनु पर्ने भएपनि पिसीआर गर्नेको संख्या बढेको हो, दिनमा ९० देखि १०० जना आउनुहुन्छ, सरकारले पिसीआर शुल्क घटाएको छ अब झनै बढला् ,उहाँले भन्नु भयो ।
डां सुवेदीका अनुसार अपरेशन गर्नुपर्ने बिरामीको थुनुवालाइ अस्पतालले गर्छ । काठमाडौ र विदेश जानुपर्ने धेरै आउने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
कोरोनाकै कारण गण्डकीमा अहिलेसम्म २८ जनाको ज्यान गएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदबिन्दु शर्माले बताए ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, भदौ ३०, २०७७ 6:31:42 PM